पायल्स के हो ? यस्ता छन् पायल्स हुनुको प्रमुख कारणहरु - ramechhapkhabar.com
पायल्स के हो ? यस्ता छन् पायल्स हुनुको प्रमुख कारणहरु
मलद्वार वरिपरिका रक्तनसा विभिन्न कारणले सुन्निनुलाई पायल्स भएको भनिन्छ। जसलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘हेमोरोइड’ भनिन्छ।अधिकांश मानिसमा पायल्ससम्बन्धी समस्या हुने गरेको छ । गोप्य अंगमा हुने हुँदा कतिपयले समयमै यसको उपचार गर्दैनन् । फलस्वरूप पायल्स बल्झिँदै जाने र भविष्यमा झन् जटिल समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ।
पायल्सको सुरुवाती चरणमा दिसा गर्ने भाग चिलाउँछ । त्यस्तै, रगत बग्ने समस्या देखिनु पनि पायल्सको प्रारम्भिक लक्षण हो। सामान्यतया चार चरणमा पायल्स हुन्छ। सुरुको चरणमा रगत बग्छ भने दोस्रो चरणमा दिसा गर्दा नसा बाहिर आउँछ । दिशा गरिसकेपछि आफैँ भित्र जान्छ।दिसा गर्दा नसा तल झर्छ भने त्यो तेस्रो चरण हो । यसलाई हातले भित्र पठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।
कति कोसिस गर्दा पनि बाहिर झरेको नसा भित्र पठाउन सकिँदैन भने यो पायल्सको अन्तिम चरण हो । यो जटिल समस्या हो । समयमै उपचार गर्न सकिएन भने रक्तअल्पता हुने डर हुन्छ।
पायल्सबाट बच्न खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ । दिसा पातलो हुने किसिमका खानेकुरा सेवन गरेर पायल्सको समस्याबाट बच्न सकिन्छ । जसका लागि रेसादार खानेकुरा, सागसब्जी खाने तथा प्रशस्त पानी पिउने गर्नुपर्छ । अध्यधिक मात्रामा माछा, मासु र रक्सी सेवन गर्नुहुँदैन । त्यस्तै, धेरैबेरसम्म दिशा रोकेर राख्नुहुँदैन।
पायल्सका कारण लामो समयसम्म रगत बगेमा रक्तअल्पता हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, हेमोग्लोबिनको परीक्षण गरी रक्तअल्पता भए/नभएको पत्ता लगाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा कीटाणुको संक्रमण भई घाउ हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा एन्टिबायोटिक औषधिको सेवनगर्न सकिन्छ।
सुरुवाती चरणमै भए दुखाइ कम गर्ने औषधि सेवन, पर्याप्त आराम तथा सिजबाथबाट पायल्स नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको भए शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। खानपान, व्यायाम र व्यवहारमा सावधानी नअपनाउने हो भने कतिपय अवस्थामा उपचारपछि पनि पायल्स बल्झिन सक्छ । तसर्थ, आफ्नो जीवनशैलीमा ध्यान दिन जरुरी छ।
पायल्सको उपचार आयुर्वेद, होमियोप्याथी र एलोप्याथी सबै चिकित्सा पद्धतिद्वारा सम्भव छ । तर, पायल्सको विनाउपचार शल्यक्रिया गर्ने भन्ने खालका हल्ला आउँछन् । यो भने सत्य होइन।
पायल्स विभिन्न कारणले हुन्छ । दिसा नियमित नहुनु, कब्जियत हुनु वा पखाला लाग्नु। खानामा फाइबरको कमी, अत्यधिक रक्सी, मासु, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन। बलपूर्वक दिशा गर्ने बानी, बुढ्यौली, गर्भवती र वंशाणुगत कारणले समेत पायल्स हुन्छ। लामो समयसम्म उभिइरहनुपर्ने पेसा भएका मानिसमा पनि पायल्स हुने बढी सम्भावना रहन्छ।